Usoro 3 ka ọkachamara na Project Management Professional Training PMP ṅụọ
Onye oru nhazi oru ngo (PMP) a nabatara ọkwa ụwa ọkachamara nke Ụlọ Ọrụ Project Management (PMI) nyere. Ikekwe ị maara na ugbu a 729,552 nọ n'ọrụ PMP ndi mmadu a kwadoro ya na 284 bu ndi ozo di iche iche n'ofe 210 mba & n'uwa niile. Onyonye Ngwá Ọrụ Ntanetị ọhụrụ (Management Project Professional) Nkụzi PMP na Gurgaon, Noida, Delhi NCR, gafere karịa 9 Cities na India, USA, UK na Australia. Ọ na-enyekwa Ịntanetị Ọzụzụ nke Ọrụ Nchịkọta Ọrụ na Ịdenye aha gị maka Ọzụzụ Ịntanetị.
Usoro Ọzụzụ Ọzụzụ Ndị Ọrụ
1. Ọrụ Nlekọta Ọrụ (PMP)
Ònye Kwesịrị Tee?
Họrọ ma mezie PMP gị
2. Onye Ọrụ Nhazi Mmemme (PGMP)
Bulie ma na-edebe PgMP gị
3. Onye na-akwado akwụkwọ na Management Project (CAPM)
Bulie ma bido CAPM
Onye na-ahụ maka Ụlọ Ọrụ Project (PMP) bụ ihe kacha mkpa maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ nlekọta ọrụ.
Ị nwere ike ịchọpụta ọrụ ụgbọelu PMPs n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla na, ọ bụghị dị ka akwụkwọ nrịba dị iche iche na-elekwasị anya na azu aha ma ọ bụ mpaghara, PMP® bụ ezigbo ụwa. Dị ka PMP, ị nwere ike ịrụ ọrụ n'eziokwu ọ bụla ụlọ ọrụ, na usoro ọ bụla na n'ebe ọ bụla.
PMP ọzọ gbasawanye ihe ị nwere. Ndi ejiri akwukwo akwukwo PMP nweta 20 percent karia ndi ha adighi aka ha kwadoro dika ekwuputara n'enye ike: Nyocha akwukwo ego, Ninth Edition.
Uzo oru ahia. N'ebe ahụ mgbe ihe karịrị 33% nke ndị isi ha na-eme atụmatụ bụ PMP-agbaara, ndị ọrụ na-emecha rụọ ọrụ ha na oge, na-eme atụmatụ ma na-ezute ihe mgbaru ọsọ pụrụ iche. (Ụkụ nke ọkachamara Profession®, PMI, 2015.)
PMP na-ekwu na ị na-ekwurịta ma ghọta asụsụ ụwa niile nke ọrụ nhazi na ndị enyi gị na otu ndị ọkachamara, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara gburugburu ụwa. Gbanwee na PMP wee ghọọ onye nsọ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nchịkwa na-arụ ọrụ nke na-elekọta akụkụ nile nke ọrụ ịmepụta ihe, ịkwọ ụgbọala na ịhazi ìgwè dị iche iche nke cross-utilitarian, mgbe PMP bụ mkpebi ziri ezi maka gị.
Ihe nyocha nke asambodo nwere nyocha 200 dị iche, ị nwere awa anọ iji wuchaa ya.
Iji mechie PMP gị, ị ga-emeri 60 ọrụ nkwalite ọrụ ọkachamara (PDUs) dị ka clockwork.
Dị ka onye nlekọta ihe omume, ị bụ onye ọkachamara n'ogo nke ọkwa na ọbara ọgbụgba nke ịmepụta ihe mgbaru ọsọ dị mkpa nke mkpakọrịta gị. Ị na-arụ ọrụ dịgasị iche iche, ndị metụtara ọrụ, na-arụ ọrụ ndị na-enweghị ike ime ma ọ bụrụ na a na-elekọta ọrụ ndị a n'otu n'otu.
Nchịkọta gị bụ ihe enyemaka. Site na mmepe usoro mmemme, ọrụ otu òtù na-amị mkpụrụ karịa na-enweghị ya - 76 percent dị iche na 54 pasent dị ka akụkọ Pulse nke Professional® n'afọ gara aga. Onye na-ahụ maka Ọrụ Mmemme (PGMP) ® bụ ihe doro anya na-egosi nghọta na njirimara gị na-enye gị ọnọdụ dị mma na-enweghị atụ na ọrụ na ọganihu.
Na ohere na ị nwere ike igosi ọrụ dịgasị iche iche, ndị metụtara ya na ịchọpụta ihe omume dị mgbagwoju anya nke na-agafe ikike, mkpakọrịta, ebe ma ọ bụ ọha na eze na ịmegharị ihe ga-eme ka ebumnuche nchịkwa, mgbe ahụ ị bụ PgMP nwere ike.
Iji malite oge nyocha bụ nyocha nke ụlọ
Ihe nyocha nke asambodo nwere 170 ọtụtụ mkpebi nyocha, ị nwere awa anọ iji wuchaa ya.
Iji mee ka PGMP gị, ịkwesịrị inweta 60 ọrụ nkwalite ọrụ ọkachamara (PDUs) na oge ọ bụla.
N'agbanyeghị ọkachamara gị, ọkachamara na Certified Associate na Project Management (CAPM) ® bụ uru nke ga-amata gị n'ọahịa ahịa ma melite ịdị irè gị ma dị mma na-ewere otu ịgba - ma ọ bụ - na - arụ ọrụ.
Mkpakọrịta na omume ndị a rụpụtara na-arụpụta ihe ka mma, dịka ọ pụtara na akụkọ ikpeazụ nke Pulse nke Profession®. Ebe ọ bụ na CAPM® na-aghọta nghọta gị n'ịdị elu nke ọkpụkpọ ahụ zuru oke, ị ga-apụta ìhè ma dị njikere ịkwalite n'ihu.
Nchịkọta oru bụ ngwa ngwa na-emepe emepe. Site na 2020, a ga-arụ ọrụ ọhụrụ ọhụrụ 1.57 kwa afọ ma chọọ ndị ọkachamara ruru eru. Na CAPM, ị ga-aga n'okporo ụzọ iji nwee ihe ịga nke ọma n'ọnọdụ.
Ọ bụrụ na ị ga-awụlikwa elu na ohere ị ga-ahụ maka nnukwu ọrụ ma nweta ọrụ ma ọ bụ tinye usoro nchịkọta ọrụ n'ime akụkụ gị ugbu a, mgbe ahụ, Certified Associate na Project Management (CAPM) kwesịrị ekwesị maka gị.
Ihe nyocha nke asambodo nwere 150 dị iche iche nyocha, ma ị nwere awa atọ iji rụchaa ya.
Iji mee ka CAPM gị, ị ga-eweghachi ihe nlele dị ka clockwork.
Nkọwa n'etiti PMP V / s PRINCE2 Asambodo